Maxay galabsadeen dhaliyarada ay waalidkood taageereen itoobiyaanka
Salaantan ka dib waxaan maalintii shalay akhriyey go,aamadii ka soo baxay shirkii qurba jooga soomaaliyeed oo ka dhacay carriga maraykanka , waxaana aad ula yaabay go,aamada qaarkood oo aan ahayn wax macquul ah ama caqliga bani,aadamku yeeli karo. Go,aamadaas oo ku qoran bogga www.somalitalk.com waxaa ka mid ahaa in la takooro kuwa taagersan itoobiyaanka aana caruurtooda la guursan loona guurin , hadaba waxaa is weydiin leh maxay galabsadeen caruurtu oo loogu qabanayaa denbi ama qaladka ay galeen walidiintoodu.
Haddii uu qof galo denbiga ugu weyn waxaan ognahay in aan waxba ka gelin waalidkiis iyo uabdkiisa midna uuna qofkaasi dembigaas xambaarsanaayo.
Tusaale ahaan gaaladii ku caasiday nebiga waxaa qaarkood ay dhaleen rag magac iyo maamuus ku leh diinta islaamka sida khaalid bin waliid oo lagu tilmaamay seeftii ilaahay halka aabahiis ahaa waliid binu muqiira oo la wada yaqaan taariikhdiisa.
hadaba waxaa aan kula talinayaa kuwii soo saray go,aamadan inay dib uga laabtaan uagana fiirsadaan go,aamadooda.
Waxaa kale oo ka mid ahaa go,aamadaas in la joojiyo xawaaladaha wax u dira itoobiya anaa loo dirin wax xawaalad ah , hadaba ma la is weydiiyey hadiiba go,aankasi maanta dhaqan galo in ay ku dhiabaatoonayaan malaayiin soomaali ah oo ku sugan dalkaas duruufona ku haystaan . Ma lagu xisabtamay in ay joogaan kuwo jiifa isbitaalada oo haddii xawalada laga jaro ay ku dhacayso daawo la,aan iyo rafaad.
Waxaa qodobadaas ka mid ahaa in aan la iibsan qaadka itoobiya, iyadoo culimada iyo dhaqaatiirta badidood isku raacday inaan qaadkaba la cunin uuna bulshada ku hayo dhibaato dhaqaale iyo caafimaad labadaba, miyaanay markaa haboonayn in lagu baaqo in la gooyo cunista qaadkaba, waayo kan itoobiya kama duwana kan kenya , oo keenyaba waan ognahay siday ula dhaqanto soomaalida oo waa tan dadka barakacay ku celisay xuduudaha, mowqifkeeduna waa la mid kan itoobiyanaka.
Canjeelada itoobiyaanka haba la joojiyee maxaa loogu dari wayey pizza da maraykanka iyo cocola iyo humbergarka.
Dhanka fiisaha in lagula soo wareego jabuuti ma xuma ee waxaa is weydiin leh jabuuti diyaar ma u tahay inay qaabisho malaayiin soomaali ah haddii ay ogolaatose jabuuti ma qadi kartaa oo ma ka helayaan guryo iyo degaan.
Anigoo aad u neceb itoobiyaanka iyo joogitaankooda iyo xasuuqaay ku hayaan soomaaliya waxaan jeclaan lahaa in haddii cid lagu cambaaraynaayo taageerada i toobiya in lagu cambaareeyo barlamanka soomaaliyeed ee ansaxiyey weliba cod aqlabiyada ah ku ansaxiyey ayna markaas ku jireen kuwo badan oo manta mucaarid ah maalintaase ahaa muxaafidiin taageersan itoobiya iyo siyaasadeeda.
Waxaan halkan hadaba talo ugu soo jeedinayaa siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada soomaaliyeed in talaabo kasta oo loo soo bandhigaayo bulshada ay noqoto mid ah danta umadda soomaaliyeed balse aanay noqon mid noota fatwo cusub oo qofkay doonto gumaysa ka doontona ka dhigta gob.
Umadda soomaaliyeedna waxay gumaysiga kaga bixi kartaa midnimo iyo wada tashi iyo ficil dhab ah.
waxaan umadda soomaliyeed u rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo gumaysiga oo dalkooda ka baxa , cadaalad iyo nabadna dalka lagu soo dabaalo, lana soo celiyo qaranimadii iyo midnimadii, iyo sharaftii umadda soomaaliyeed.
Kuwa taageerdaa u haya itoobiyaankana iyaga oo keli ah ayaa tariikhdu takooraysaa ee caruurtoodu hadaanay iyagoo kale noqon wax kagalay ma jiraan waa muwaadiniin soomaaliyeed oo xor ah cidina aanay ka qaadi karin haybadooda alle siiyey.
Guurkuna waxa uu leeyahay wadooyin sharci ah oo loo maro , laguna doorto qofka la guursanaayo ee looma eego aabihiis wuxuu sameeyey ama hooyadii taasna waxaa na baray diinta islaamka oo ah dastuurka alle ee sharciga ah.
Gunaanadka hadalkayaga waxaan soomaalida ugu baaqayaa bal inay akhriyaan go,aamada shirkaas, fikirkoodana ka dhiibtaan hadii aan qalad fahmayna la i qabto .